kkchha.com:: लोकमान लाई जेल हाल्न किन सकिन्न सरकार (सम्झना पौडेल)
लोकमान लाई जेल हाल्न किन सकिन्न सरकार (सम्झना पौडेल)
By प्रकाश धिताल October 21, 2016
केकेछ डटकम – परिवार- काठमाण्डौ – कार्तिक ०५
सम्झना पौडेल , यतिखेर देश लोकमानमय भएको छ भन्दा फरक नपर्ला । लोकमानलाई हिजो नै जेल हाल्नु पर्ने हैन ? किन सक्दैन सरकार ? कारण देखाउ । कुन ठाउबाट देश अनि सरकार चल्छ पर्दाफास गर सरकार । आफ्नै देशको जिम्मेवार निकायमा भएको फाईल नभेट्टाउने, कहिले विदेशमा रहेमा ’लुक’मानलाई लुकाउने कहिले भारत सम्म बोलाएर पद जोगाउने खेल कहिले सम्म ? पहिला कटुवाल काण्डले प्रधानमंत्री पद खुस्कियो अब लोकमानसिंह काण्डले प्रधानमन्त्री पद खुस्किने भयो ।
अब लोकमानलाइ नियुक्त गर्ने प्रचण्ड, केपि र देउबालाइ जेल हाल्नुपर्दछ । जब लडाकु शिबिर घोटालाको नाम निस्क्यो डरले थुरर काप्दै महाअभियोगको प्रस्ताब ! हो लोकमान प्रवृत्ति गलत थियो अहिले पनि कानुन उल्लंघन गरेर झन गलत भएको साबित गरिदिए । कार्किलाइ महाअभियोग लगएर पदमुक्त गर्ने मात्रै होइन उनलाइ झ्यालखानामा कुच्नु पर्छ । एमाले र माओबादी मिलेर लोकमानका बिरुद्ध एकाएक महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउने सहमती कहा बाट आयो ? यहाँ खेल अर्कै छ !
लडाकु शिविरमा ५ अर्व घोटला भएको सबैलाई थाहा नै छ ! अहिले लोकमान ले शिविरमा भएको घोटलाको फाईल खोले ! अब अर्वौ को काण्डमा आफुहरु पर्ने भए पछी एमाले र माओबादी मिलेर रातारात लोकमान लाई नै हटाउने तर्फ लागे ! हिजो सम्म एकले अर्का लाई गाली गरेर नथाक्ने ओली र दाहाल रातारात कसरी एकै ठाउमा उभिए ? काँग्रेस चुपचाप डिलमा बसेर एमाले र माओबादीका नेताहरु जेल गएको हेर्न चाहन्छ र यसैमा राजनितीक पनि फाईदा छ ! नेता विदेशीको गोटी किन बन्दैछ ? अब युवा जमात अगाडि आउन जरूरी छ ।
देउवाले लोकमान सिंह कार्कीलाई कारवाही हुनुपर्ने कुरामा समर्थन जनाई रहेको समयमा केही चम्चे मिडियाहरू भने नेपाली कांग्रेस लोकमानको पक्षमा रहेको देखाउन भगिरथ प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । प्रजातन्त्रको स्वस्थ प्रयोग गर्ने युगाण्डा आज दुई दशकको बिचमा बिकासको एक नमुनाको रुपमा उभिएको छ । तर यहाँ मनपरीतन्त्रमा गरिबी , भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, अनाचार, कुशासन र राष्ट्रघातको खिचडि पाकिरहेको छ ।
जसले बिगार्यो र बर्बाद पार्यो सट्टामा देशको जिम्मा हामीले पाउनु पर्थ्यो तर उल्टै देश त बिगारेर बसेकाहरुको हातमा पुग्यो । एनजीओ टाईपका पाटि खोलेर बसेका १०० का दरले राजा आउ देश बचाउ भन्दै आजै काठमाडौं शहरको सडकमा निस्किएर राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग गर्दै नेपाली जनताको भाग्यनिर्माता भन्दै कुर्लिदैछन ।
यो एक्काइसौं शताब्दीमा न त लोकतन्त्रको घाटिमा उहीँ पुरानो डेमोक्रेसीको तरबार झुन्डिन सक्छ ? माक्र्सवादी प्रयोगको चरम अनुद्धारवादि धारा पोलपोट धारले नै स्थान लिन सक्दछ। गुण्डाहरुलाई त समात्न डराउने सरकार छ नेपालमा झन् लोकमान जस्तो अख्तियार प्रमुखलालाइ समात्न किन सक्थ्यो र ? कति लाज लाग्दो कुरा छ पुलिस लगेर भने पनि पुर्जिको सूचना टाँस्न सक्थ्यो तर आफन्तहरुले अबरोध गरेको रे यस्तो लाज लाग्दो कुरा पनि कहिँ हुन्छ ?